अघोरी : विद्यमान सामाजिक, राजनीतिक विकृतिविरुद्धको चोटिलो प्रहार « News24 : Premium News Channel
अघोरी : विद्यमान सामाजिक, राजनीतिक विकृतिविरुद्धको चोटिलो प्रहार
प्रकाशित मिति : Dec 01, 2018
हेटौँडा । मकवानपुरका स्रष्टा तथा साहित्य अनुरागीले कथाकार राजेन्द्र पराजुलीद्वारा लिखित कृति ‘अघोरी’ विद्यमान सामाजिक, राजनीतिक विकृतिविरुद्धको चोटिलो प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
साहित्य सङ्गम मकवानपुरले आज हेटौँडामा आयोजना गरेको पुस्तकमाथिको विमर्शमा पाठकले विषय विविधताका दृष्टिले कथा सङ्ग्रह उत्कृष्ट रहेको बताएका हुन् । पत्रकारितासँगै साहित्य लेखनमा सक्रिय पराजुलीका अघोरी कृतिमा १७ कथा सङ्ग्रहित छन् ।
समीक्षक घनश्याम घिमिरेले अघोरीका कथाले समाजलाई तरङ्गित र गतिशील बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको बताउनुभयो । “अघोरीका नारी चरित्र समाजमा तरङ्ग ल्याउन सफल देखिएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “मधेशका पात्रको सशक्त उपस्थितिले नेपाली राष्ट्रियतालाई थप फराकिलो बनाइदिएको छ ।” गुमदेशका कथामा नेपालीको राष्ट्रप्रतिको पे्रमलाई उतारिएको छ ।
साहित्यकार अप्सरा तिम्सिनाले पत्रकारिता शैलीमा लेखिएकाले कथा सङ्ग्रह पठनीय विचार व्यक्त गर्नुभयो । “चरम गरीबीमा पनि पे्रम झाङ्गिएको दृश्य रोमान्टिक लाग्यो” उहाँले भन्नुभयो । पाठकसँग साक्षात्कार गर्दै लेखक पराजुलीले नेपाली जनताले बढी अपेक्षा गरेका कम्युनिष्ट शक्तिसमेत स्खलित भएकाले कम्युनिष्टलाई नै अझ बढी प्रहार गर्नुपरेको जिकिर गर्नुभयो ।
साहित्य सङ्गम मकवानपुरका अध्यक्ष निमिष निखिलले समाजमा व्याप्त समस्या, राजनीतिक चरित्रलाई लेखकले जस्ताको तस्तै पस्कन सफल भएको बताउनुभयो ।
कविता : विश्वविद्यालय अर्थात् फोटोकपी सेन्टर
काकडभिट्टामा चाैथे कला-साहित्य उत्सव फागुन १८ देखि हुने
प्रणय-दिवसविशेष : त्याे भ्यालेन्टाइनपछि समिर काेमामै रहे‍…
प्रणय-दिवसविशेष : हामीले गर्ने प्रेम कस्ताे ? के प्रेम अन्धो नै हुन्छ ?
वालिङमा खुल्ला राष्ट्रिय कविता प्रतियोगियता सम्पन्न
डा.तुम्ला लौकाल शाहको ‘लुना’ पुस्तक लोर्कापण